Umaki: godaddy | Martech Zone
NgoMsombuluko, Disemba 16, 2019 NgoMsombuluko, Disemba 16, 2019 Douglas Karr
Kubukeka njalo ngesonto ukuthi inethiwekhi yokuxhumana nabantu ishintsha izakhiwo futhi idinga ubukhulu obusha bezithombe zabo zephrofayili, isendlalelo sangemuva, nezithombe ezabiwe kumanethiwekhi. Imikhawulo yezithombe zenhlalo iyinhlanganisela yobukhulu, usayizi wesithombe - kanye nenani lombhalo eliboniswa ngaphakathi kwesithombe. Ngizoxwayisa ngokufaka izithombe ezinkulu kumasayithi wezokuxhumana. Basebenzisa ukucindezelwa kwesithombe esinolaka okuvame ukushiya izithombe zakho zifiphele.
I-GoDaddy: Ukushiya i-Boobs Behind and Kicking Ass
NgoMsombuluko, Juni 16, 2014 NgoLwesibili, ngoFebhuwari 26, i-2019 Douglas Karr
Ngangizonda iGoDaddy. Ngenze njalo. Angikholwanga ukuthi umkhiqizo ungachitha izigidi zamadola ukhanyisa ukukhanya futhi uqhubeke nokwakha ibhizinisi elingaka. Kwakuyimpama ebusweni kubakhangisi abasebenze kanzima ukugcina imikhiqizo yabo ifanele, isobala, inobuhlakani futhi iyasiza ezilalelini zabo. Kwakuyindlela elula yokuphuma… futhi kwabonakala kusebenza. Ngeluleke wonke amaklayenti ami ukuthi asebenzise ezinye izinsiza futhi angahlali. Ngokuhamba kwesikhathi, noma kunjalo,
I-GoDaddy ithi ukwephula uphawu lwentengiso kusizinda seGo-Daddy esithengwe kwaGoDaddy
NgoLwesihlanu, Agasti 24, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Namuhla ngithole ucingo oluvela kubanumzane abebezibuza ngobudlelwano bami neNoDaddy.com, isayithi elidla iGoDaddy ngemikhuba yalo yebhizinisi. Ngemuva kokuthi ngiqale ukukhuluma noJohn, ngamangala ukuthi kwenzakalani ngaye. UJohn uthenge i-Go-DADDY-DOMAINS.COM ne-Go-DADDY-DOMAIN.COM kusuka ku-… ubani omunye… GoDaddy.com. Angiqiniseki ukuthi uJohn wamangala yini noma cha ukuthi ukwazile ukuthenga izizinda, kepha yimina! Uma uzibuza ukuthi uJohn unjalo yini
Ngabe Umbhalisi Wakho Angakunqamula?
NgoLwesine, Februwari 1, 2007 NgoLwesine, Januwari 5, 2017 Douglas Karr
Ngokwenza okukhulu mayelana nokukhanselwa kweGoDaddy ikhasimende layo (manje elinomkhankaso walo: NoDaddy.com), nginqume ukubheka abanye ababhalisi, kufaka phakathi nabami, ukubona ukuthi bangadonsa ipulaki kalula njengoba kwenza uGoadaddy. Empeleni uzomangala, ababhalisi abambalwa kuphela abanemigomo yesevisi esetha ezinye izidingo eziqinile ngokumelene nokukhanselwa: iDotster: ukumiswa kwesizinda se-16.2, ukukhanselwa noma ukudluliswa. Uyavuma futhi uyavuma ukuthi ifayela lakho le-
NgoLwesine, Januwari 18, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ngibuke umbukiso wezindaba ngolunye usuku ukuthi iGoDaddy izokhangisa ezinye izikhangiso zeSuperbowl eziphikisanayo. Ithimba lezentengiso leGoDaddy licindezela impela umkhawulo kulo nyaka, lithola ukunakwa okwengeziwe ngokuthumela inqwaba yezentengiso enqatshelwe ukubuka le superbowl. IGoDaddy ikhangisa ngokusobala impikiswano njenge-Quest yabo yeSuper Bowl XL. Uzothola umugqa wesikhathi omuhle wezikhangiso ezinqatshelwe ukubukwa kuzo